धेरै रि’साउने व्यक्तिलाई हृ’दयघातको ख’तरा ,जनिराखौ !!! « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाण्डौ : रि’स उठ्नु एक स्वस्थ्य र अस्वस्थ्य दुवै मानिसहरुको लागी ख’तरा हो । रि’सले तपाई , परिवार , समाज र काममा समेत ठुलो समस्या निम्त्याउछ । त्यसैगरी स्वास्थ्यको दृ’ष्टिकोणले मतिष्क र मु’टुमा अ सर पर्ने भएकाले हृ’दयघातको ख’तरा हुन्छ । आज हामी तपाईलाई कसरी धेरै रि’साउने व्यक्तिलाई हृ’दयघातको ख’तरा हुन्छ भन्ने विषयमा कुरा गदै छौ । डा. ओम मूर्ति अनुसार रि’सले स्वास्थ्यमा धेरै बेफाइदा पुयाउने बताउछन् । किनभने उनको जीवनमा रि’सले पारेको न’करात्मक प्र’भावको बारेमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा यस्तो पोष्ट गरेका छन् ।दुईवर्ष अघिको कुरा हो ।
मेरो अस्पतालमा एक व्यक्तिसँग ठुलो भनाभनको क्रममा केही अ’प्रिय शब्दहरु पनि प्रयोग भयो । त्यसपछि उनी धेरै रि’साए । यो वि’वादपछि उनी आफ्नो गाडीमा घर फर्कदै थिए त्यसबेला उनको देब्रेछातीमा अस’हज महसुस भयो । त्यसपछि उनले रि’सले मु’टुमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा रिर्सच गरे ।त्यसपछि उनले सन् २०१५ मा प्रकाशित एक रिसर्चमा ध्यान दिए । यो रिसर्चमा ‘रि’स उठेको व्यक्तिमा हृ’दयघात र म’स्तिष्क घा’तको ख’तरा दुई देखि तीन गुणासम्म बढी हुने देखाएको थियो ।त्यसैगरी सन् २००६ देखि २०१२ सम्म अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा गरिएको एक अनुसन्धानमा त्यहाँको नागरिकलाई हृ’दयघात हुनुभन्दा २४ घण्टा पहिले रि’स उठेको पत्ता लागेको थियो ।
जसमा २.२ प्रतिशत व्यक्तिले हृ’दय घा’त हुनुभन्दा पहिला एकदमै धेरै रि’स उठेको बताए ।उक्त अध्ययन अनुसार रि’स नउठेको व्यक्तिभन्दा रि’स उठेको व्यक्तिमा ८ गुणा हृ दयघा त ख’तरा बढी हुन्छ । परिवारसँग रि’स उठ्दा २९ प्रतिशत हृ’दयघात भएको र काम गर्ने ठाउँमा, गाढी चलाउँदा, ट्राफिक जाममा पर्दा रि’स उठेर धेरैलाई हृ’दयघा त भएको अनुसन्धानमा पत्ता लगेको छ । रि’सले मुख्यतया मानिसहरुको म’तिष्क ,फोक्सो र मु’टु असर पार्दछ । त्यसैले मधुमेह, उच्च रक्तचाप, धु’म्रपान गर्ने बानी, उच्च क्लोस्टोर र औषधी खाने व्यक्तिहरुले आफ्नो रि’सलाई नि यन्त्र ण गर्नुपर्दछ । यदि रि’सको नियन्त्रण नभएमा हृ’दयघा तको ख’तरा हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोला :अ’चम्मको झरना, जहाँ बषौदेखि आ’गो ब’लिरहेको छ , शे’यर गरौ र पुरा एक पटक अबश्य पढ्नुहोला !!!!
काठमाण्डौ : यो संसार धेरै र’हस्यमयी चिजहरु छन् । केही पत्ता लागेका छन् केही बाँकी । सुन्दा र देख्दा नै अ’चम्म लाग्ने घ’टनाले मानिसहरुलाई च’कित तुल्याउँछ । यस्तै एउटा अ’चम्को झरना छ जहाँ आ’गो निरन्तर ब’लिरहन्छ ।
एउटा र’हस्यमय ढुङ्गाको माथिबाट लगातार झरना बगिरहन्छ तैपनि झरनाको ठिक तल कयौँ वर्षदेखि आ’गो बलिरहेको छ ।यो झरना न्युयोर्कको चेस्टनट रिज काउन्टी पार्कमा पर्छ । जसलाई आजभोलि एटरनल फ्लेम भनिन्छ । यो झरनाको विशेषता भनेको यहाँ वर्ष भरि पानी बगिरहन्छ र यसको ठ्याक्कै तल आ’गो ब’लिरहन्छ ।
१८ वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक फेसबुकका दैनिक सक्रिय प्रयोगकर्ता घटे
पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई,कमल थापा हराएर राजेन्द्र लिङ्देललाई जिताउदा के फाइदा छ र ? सबै एमसिसीको परीणाम हो भन्दै आक्रोशित भए सकुल शाह (भिडियो हेरौ)